Eyesibonelelo izokhokhwa ngenkontileka entsha noCPS | isiZulu
Eyesibonelelo izokhokhwa ngenkontileka entsha noCPS
I-Sassa ithi asikho isivumelwano efinyelele kusona neCPS
Kuboshwe 'umashonisa' obanjwe nenqwaba yamakhadi akwa-Sassa
Abakwa-Sassa bahlongoza ukuyidiliva ngezimoto zemali eyesibonelelo
Cape Town – Izinkinga ezithinta inkontileka ye-Cash Paymaster Services (CPS) sezixazululilwe ngenkontileka entsha ephakathi kwale nkampani kanye no-Sassa, lokhu kushiwo uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ngoMsombuluko, eKapa.
“Ngosuku lokuqala ku-Ephreli siqala inkontileka entsha, kodwa nenkampani efanayo,” kusho owakwa-SA Social Security Agency (Sassa), uZodwa Mvulane, esithangamini sabezindaba ebesiseKapa.
“Asidingi ukuya enkantolo ukucela ukulula (inkontileka). Kodwa sizoya enkantolo siyozichaza,” usho kanje.
OLUNYE UDABA: Ugxekiwe okhulume ngoMageba emsakazweni olalelwa yizinhlanga zonke
NgoMashi wangomhlaka-15, iNkantolo yoMthethosisekelo izolalela isicelo seBlack Sash sokuthi inkantolo iphinde iqaphe ngeso lokhozi uhlelo lokuholelwa kwesibonelelo sikahulumeni kanye nokuthi kuvezwe obala imininingwane yesivumelwano esisayiniwe.
Ngonyaka ka-2014, inkantolo yanquma ukuthi inkontileka ye-CPS yayingekho emthethweni yabe isiyalela ukuthi kube nohlelo olusha lokukhishwa kwethenda. Kodwa-ke ngenxa yokuthi ayikho enye inkampani eyatholakala neyayingakhona ukuthi yenze lo msebenzi, isinqumo sokungabi semthethweni kwale nkontileka salengiswa kuze kube umhlaka-31 kuMashi.
UMnyango bekumele ube usunohlelo lwawo lokuholela uma sekufika umhlaka-1 ku-Ephreli, kodwa lokhu akukenzeki, nosekudale ukusabela ngokuthi abantu abangu-17 million bazosithola kanjani isibonelelo.